Sei WonderfulPCB - Shenzhen Anoshamisa Technology Co., Ltd
Quick Dzokai pcb
Bofu / Kuvigwa Via
Wonderful pcb sezvo aitungamirira mugadziri pamwe anopfuura 20 ruzivo mune pcb (Printed Circuit Board) Industry.
We dzidzira mu mukugadzira uye vachitengesa mukuru-zvakarurama, mukuru arambe achirema PCBs kaviri madziro uye multilayer PCBs.
Mugadziri zvakananga Pricing & mutengi mabasa ichaunza isu kukunda-kukunda pamwe ukama!
Vaipupurirwa Quality Standards
Chikonzero chikuru nei tiri vaifarira pcb mugadziri kuti vatengi yose iri kuomerera kwedu kune inoomesera unhu zvinodiwa dzinoshanda ose nzvimbo bhizimisi redu. Somuenzaniso, kwedu mureza PCBs kusangana achirayira IPC2 yepamusoro mureza, apo yedu proto mapuranga anogadzirwa kuzadzisa IPC1 abvume. Uyezve, redu gungano mabasa azadzise IPC3 mureza chinodiwa. Tiri zvakazara aiteerera pamwe ISO9001: 2008 unhu zvakanaka enyika.
Quality Inogadzirisa pamwe In-imba yedu Quality Reviews
Takaona chinozoiswa dzakawanda proactive matanho ritsigire kunaka pezvakaitwa edu uye zvigadzirwa. ouinjiniya dzedu chikwata macheki ose pcb magadzirirwo asati kutanga firimu / gungano danho kuitira hapana yokusafa zvaunokanganisa uye kuti magadzirirwo asangana mutengi wacho chaiwo nokurondedzerwa. We kutora imwe danho wokudzidza Design kuti gadzira (DFM) Muedzo chero okuwedzera muripo. Tinewo zvizere unhu kudzora dhipatimendi patsvimbo kuita nzwisisika inspections uye vachindiedza vasati kutumirwa Finished chigadzirwa kune nzvimbo yako, kusanganisira Electrical Test, zvoga Optical Inspection (Aoi), zvoga X-ray Inspection (AXI), etc. Unogona kuva uchinyatsovimba unhu hwako pcb uye unongotaura.
Ponesai nguva uye yakawanda
Tinopa Full mabasa Turnkey pcb Assembly, iyo inosanganisira pcb nhema chinoumba zvokuvakisa, uye gungano pcb. Our basa rimwe-vanorega negates kudiwa kuti kushandisa akawanda bhizimisi mhiri timelines siyana, saka uchiwedzera unyatsoshandisa nguva yako uye mari-kushanda. Somunhu kambani svikiro kadikidiki, tiri zvakakwana vanoteerera zvedu vatengi 'zvinodiwa uye anogona kupa nenguva uye munhu zvichienderana nebasa kuti kurei yemakambani havagoni kutevedzera. Our wakanaka yeGmail.END_STRONG kugutsikana mwero ndiko testamendi kuti kukwanisa kwedu kufadza.
Kutengeka uye zvemakwikwi Pricing
Ungave uchitsvaga mashoma PCBs kana zviuru PCBs, uchafarirwa. yakanakisisa ukoshi pcb mabasa kubva kwatiri.
Tinoda kupa inonyanya kukosha pcb kuzvipatara uye mukurusa zvokutengeserana ruzivo mune zvakanaka mutengo. Tichibata zviuru chikamu nhamba riri hwaro gore negore uye mumakore edu makore 20 kushanda kuti zvevakomana, takadzidza kuti kushumira vatengi vedu uye sei kuvashandira zvakanaka. Idzi dzinongova dzimwe zvinhu vatengi edu akafanana nesu;
• Instant paIndaneti mashoko, arayira uye reordering mamiriro
• Quality avimbiswa mabasa
• yemakwikwi mutengo & NO Maminitsi murayiro uwandu kunodiwa
• 99% + mutengi kugutsikana zvazvingava
• ruzivo rutsigiro chikwata zvinowanikwa Via parunhare uye Email
• Free DFM cheki ne mainjiniya nyanzvi
• Rinoshanda bvunzo kwakavakirwa dzakananga zvinodiwa mutengi wacho
• Hapana mamwe tooling vabhadharise pcb reorders
Tapota nyorerai paemail wonderfulpcb@wonderfulpcb.com nokuda more info kana Contact US paIndaneti